Inye kwabahlanu eBrits yayiza kusebenza kwi-porn ukuba intlawulo yayilungile kwaye umsebenzi ukhuselekile
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » Inye kwabahlanu eBrits yayiza kusebenza kwi-porn ukuba intlawulo yayilungile kwaye umsebenzi ukhuselekile
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • Iindaba zefashoni • Imiboniso bhanya bhanya • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • umculo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Indlela eyamkelekileyo yokwamkelwa kwikhondo lomsebenzi eyayikhe yathathwa njengemithetho engqongqo ikhule nje ngokuxhumaxhuma, ukuvuza kwizifundo zabantu abadala kunye nokwenza iifowuni zokudala "inqanaba lokungena kwi-porn" kulutsha.
Abancinci babenethuba lokucinga ngokungena kumzi mveliso we-porn, ngelixa i-8% yabo bangaphezulu kwe-55 babeqwalasele olo tshintsho.
Ngaphezulu kwesithathu (i-34%) babukela iphonografi, eyakhe yathathelwa ingqalelo kukuzonwabisa okulihlazo, "njengenxalenye eyamkelekileyo kuluntu lwanamhlanje."
I-poll entsha ifumene ukuba phantse i-20% yabantu baseBritani baya kungena kwikhono loonografi, nje kuphela ukuba imbuyekezo yezemali yayiphezulu ngokwaneleyo kwaye indawo yokusebenza yayikhuselekile.
I-19% yabantu abadala base-Bhritane abathi bayakuthathela ingqalelo ukusebenza kumzi-mveliso we-porn bacebisa ukuba umsebenzi wesondo sele uyinto "eyamkelekileyo" eluntwini.
Ngokweziphumo zovoto, i-34% yabantu abadala base-Bhritane babukela iphonografi, eyakhe yathathelwa ingqalelo njengokuziyolisa okulihlazo, "njengenxalenye eyamkelekileyo kuluntu lwanamhlanje."
Kuyabonakala ukuba, abantu abadala abasebancinci kunokwenzeka ukuba bakuthathele ingqalelo ukungena kwi phonografi Umzi-32% wabaneminyaka eli-18 ukuya kuma-34 ubudala bayicingile- ngeli lixa iipesenti ezisi-8 zabo baneminyaka engaphezulu kwama-55 bebeqwalasele olo tshintsho lomsebenzi.
Ngaphandle kwendlela evulekileyo yokucinga malunga nomzi mveliso, nangona kunjalo, ngaphezulu kwesiqingatha (51%) sabaphenduli bovoto bavumile ukuba bayakhathazeka xa befumanisa ukuba ilungu losapho lomntu omdala livelisa umxholo othengiswa kwiindawo ezinjenge-Pornhub okanye i-OnlyFans.
Phakathi kwabo bangaphantsi kweminyaka engama-35, ngama-41% kuphela athe banokuba nexhala malunga nesiphumo esinje, ngelixa i-59% yabo bangaphezulu kweminyaka engama-55 bayakuyifumana ibangela inkxalabo.
Uvavanyo lwabantu abadala abangama-2,087 base-Bhritane bagunyaziswa ngabantu abachasene nemifanekiso engamanyala Iprojekthi yeNak yeNyaniso, ezibiza ukuba iziphumo zovoto ziyaphazamisa, uqaphele ukuba ukwanda kolwazi malunga nokuba bangaphi na "abadlali" be-porn abathengiswayo kwaye baxhatshazwa ngokuchasene nentando yabo akubonakali ngathi kukuguqulela abantu abazahlukayo kwishishini.
"Kukho abantu bayo yonke iminyaka abafikelela kumxholo ocacileyo rhoqo-umxholo onefuthe elibonakalayo kunye nelibi kubudlelwane, impilo yengqondo kunye nokuzithemba kwabo babukeli kunye nabo basebenza kolu shishino," Iprojekthi yeNyaniso yeNyaniso umsunguli, u-Ian Henderson, utshilo, echaza ukuxhaphaka kwe-porn kubomi obuqhelekileyo.
Kwaye ukwamkelwa okuthandwayo kwendlela yobomi eyayikade ithathwa njenge-taboo engqongqo ikhule kuphela ngokuxhuma kunye nemida, ukuvuza kwizifundo zabantu abadala kunye nokwenza iifowuni zokudala "inqanaba lokungena kwi-porn" kulutsha.
Ngelixa ezona ndawo zidumileyo zibamba zobulili imathiriyeli- ukusuka kuthungelwano lwe-MindGeek olulawulayo kushishino lwee-porn ukuya I-FFUkungena kutshanje kodwa kube yimpumelelo yokungena kushishino- ngamanye amaxesha kuxhomekeke ekugwetyweni yimikhosi yangaphandle efana neeprosesa zokuhlawula okanye iinginginya zewebhu, ukoyikeka ngamanye amaxesha akukho nto ingako bayenzileyo ukuthintela ishishini elihlumayo.
Ubukhulu becala, ezi zithintelo zibangele utshintsho oluncinci kwaye ngamanye amaxesha utshintsho lwexeshana. Emva kokutyholwa ngokwanda kwamanyala abantwana kunye neevidiyo zokudlwengula kunyaka ophelileyo, i-Pornhub yahlaziya umgaqo-nkqubo wayo, ivumela kuphela amaqabane aqinisekisiweyo kwaye aqinisekisiweyo ukuba athumele umxholo.
I-Fans kuphela yabonakala ngathi ilindelwe kukutshabalala kwinyanga ephelileyo njengoko ibhengeza ukuba umxholo onokwabelana ngesondo kuya kufuneka ujelwe ecaleni ukuthintela ukuba bangadweliswa ngabaprosesa abanobuqili. Indawo, nangona kunjalo, ibuyisile ikhosi kwisithuba seentsuku ezimbalwa, ibhengeza ukuba "iya kulunqumamisa" utshintsho lomgaqo-nkqubo, olukhokelela ekuncwineni okubanzi kokukhululeka kubadali bemixholo abenza imali yabo ngokuthengisa ubumnandi kwisiza nakubathengi.